Iindaba zeBitcoin-Funda ukuRhweba
Ukondla kweendaba zeBitcoin
NgeCawa, nge-23 kaJanuwari 2022
I-Bitcoin iRekhoda iNzululwazi ePhakamileyo yoBubunzima kwiMbali phakathi kokudodobala kweMarike
NgoLwesine, i-Bitcoin (i-BTC) irekhode ukulungiswa kobunzima be-357, eyaqhuba i-9.3% ephezulu kuneeveki ezimbini ngaphambili. Oko kwathiwa, ubunzima bokumbiwa kwenethiwekhi ye-Bitcoin bafake irekhodi elitsha eliphezulu kwi-26.64 kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Ngokucacileyo, irekhodi lokugqibela eliphezulu larekhodwa nge-15 kaMeyi, 2021, xa uthungelwano lunyuke ngaphezu kwe-25 yetriliyoni. […]
NgoLwesine, uJanuwari 20, 2022
Iingxelo ezintsha zibonisa ukuba i-Bitcoin (BTC) iidilesi ze-whale kunye ne-1,000 ukuya kwi-10,000 ye-BTC zifumene iingqekembe ezininzi kwiiyure ze-48 zokugqibela. Umboneleli we-Analytics uSantiment ubike ukuba iipaji ezinkulu zeBitcoin zifumene malunga neengqekembe ze-40,000 kwiintsuku ezimbini zokugqibela. Okwangoku, inani leengqekembe ezilawulwa yimikhomo ye-BTC ibuyele kwinqanaba lokulahla kwangaphambili. […]
NgoLwesine, uJanuwari 13, 2022
Kwimeko engalindelekanga ye-Bitcoin (BTC) kunye nemarike ye-crypto ebanzi, i-bullish sentiment ibuyile, inceda imarike ukuba imise umjikelo wangaphambili we-bearish. I-benchmark cryptocurrency irekhode eyona ntshukumo yandisiweyo ye-bearish ukusukela ngo-2018 kwiveki yokuvula kaJanuwari, njengoko abahlalutyi abaninzi belumkisile ukuba ukuthengiswa okukhulu kunokubakho xa […]
NgoLwesibini, Januwari 11, 2022
Uqhushululu lwasekuhlaleni oluqhubekayo eKazakhstan lubangele umdla kwabaninzi malunga nefuthe elinokuba nalo kwi-bitcoin hashrate yehlabathi. Ezi nkxalabo zivela njengoko iKazakhstan ikholelwa ukuba ilawula ubuncinane i-18% ye-hashrate yehlabathi, ngokutsho kwengxelo yamva nje evela kwi-Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). I-NABCD iqinisekisa ukuba iBitcoin ayichaphazelekanga […]
I-Bitcoin (i-BTC) kunye nemarike yemali yedijithali ifumene ilahleko enkulu kule veki, njengoko i-cryptocurrency ye-benchmark yehle ngaphezulu kwe-12% kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo. Kuphela izolo, i-cryptocurrency ifike kwindawo yayo ephantsi ukususela ngoSeptemba, isondela kufutshane ne-$ 40,000 ngeenxa zonke kodwa yamisa phakathi kwi-40,500 yeedola. Kwakhona, iingxelo zibonisa ukuba umthamo wezorhwebo weBitcoin wehlabathi […]
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 7, 2022
Umhlalutyi we-Goldman Sachs: I-Bitcoin inokuthi iBango nge-50% yeMarike ye-SoV kwiminyaka emihlanu
Goldman Sachs umhlalutyi kunye co-intloko yeqhinga lwehlabathi lwangaphandle exchange Zach Pandl watyhila imbono yakhe Bitcoin (BTC) kwinqaku lophando isasazwe kubathengi ngoJanuwari 4. Umhlalutyi waqinisekisa ukuba benchmark cryptocurrency kusenokwenzeka ukuqhubeka chip kude isabelo semarike kwigolide. (XAU) ngo-2022 njengoko imali ye-crypto ifumana ukwamkelwa ngokubanzi. I […]
IINTSHOLONGWANE ZASE GOLDMAN
NgoLwesine, uJanuwari 6, 2022
I-Bitcoin (BTC) ekugqibeleni yabanjwa phantsi koxinzelelo lwe-bearish oluhlala ixesha elide njengoko i-benchmark cryptocurrency yehla yaya kutsho kuma-42,400 eedola asezantsi kwiiyure zakuqala ngoLwesine. Okwangoku, i-BTC ithengisa i-$ 42,800 okanye -7.3%, ngokutsho kweCoinMarketCap. Ngeli xesha, imarike ye-crypto ebanzi yabelana ngekamva elifanayo njengoko yehla nge-8.7% ngaphezulu kwe-24 edluleyo […]
NgoLwesibini, Januwari 4, 2022
I-2022 yaqala ngenqaku elicothayo kunelilindelweyo leBitcoin (BTC), njengoko i-cryptocurrency yokulinganisa ibeka umsebenzi ophantsi nangona iingqikelelo ezininzi eziphezulu ekuqaleni konyaka. I-cryptocurrency igcine imbonakalo yomtyali-mali eyoyikisayo kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo phakathi kwethoni ye-bearish engapheliyo. Nangona kunjalo, i-hashrate ye-Bitcoin yenze ngokwahlukileyo, njengoko irekhoda […]
NgeCawa, nge-2 kaJanuwari 2022
Njengoko i-Bitcoin (i-BTC) iphelile i-2021 kwi-dizzying fit and off the common expectations ngabahlalutyi beemarike, abatyali-mali baziva ngathi baqala i-2022 ngokungaqiniseki okukhulu. Oko kwathiwa, abahlalutyi abadumileyo botyalo-mali lwe-crypto u-Anthony Pompliano kutshanje babelane ngeengqikelelo zakhe kwishishini le-crypto ngo-2022, wongeza ukuba i-2022 iya kutshintsha indlela abatyali-mali abaninzi abajonga ngayo […]
Lwesine, Disemba 30, 2021
Ngokutsho kwedatha yakutshanje, ukusetyenziswa kwe-Replace-by-fee-inketho yokuthengiselana kwinethiwekhi ye-Bitcoin (BTC) evumela ukuba unyuse umrhumo kwintengiselwano emva kokuba ithunyelwe ukugqitywa ngokukhawuleza-yandiswe ngokuphindwe kabini kwi-2021. Abahlalutyi bacinga ukuba oku kungabonisa ukuba ukwamkelwa kweBitcoin kubangele ukwanda kukhuphiswano lwabasebenzisi […]